Youth Aware Magazine - Oromo
Talaallin COVID-19 jira?
Talallin COVID-19 haalan baay’inni muraasa ykn tiqqaa ta’e dhuma bara 2020 dura Isteeta Waashingtan keessa qaqabuu ni jalqaba. Akka nuti eegnutti, raabsaan ykn dhiheessiin suuta suutan dabalaa deemuudhaan akka talaalli COVID-19 heddumminnaan argamu taha akka namni talaallii fudhatuu barbaadu hundu argatutti birraa yookaan bona 2021 keessa.
Eeyyamni Fayyadamuu Yeroo Ariiffachiisaa ykn Muddamaa Maali?
Talaallin COVID-19 akkamitti akkanatti ariitidhaan hojjatame?
Talaalliin COVD-19 akkamitti hojjata?
Faaydaani talaallii COVID-19 fudhachuu maali?
Talaallii fudhachuufii akkasumas gorssaa Fayyaa Hawaasa jalaa deemuudhan ifiif nama biraas ittisuun ammaaf irraa caallaa ittiisati COVID-19 tiin irraa.
Talaallii COVID-19 yoomin argadha?
Talaallin COVID-19 hangi baay’ee murtaayen dhuma 2020 dura Isteeta Waashingtan keessa ni qaqaba. Yeroo talaalliiwwan xiqinaan dhiyaatanitti, Damee Fayyaa Isteeta Waashingtan, koree gorsitootaa fayyaadama talaalli(ACIP) ykn hama dandeetti ittisa CDC hordofanii dura duuba qabsiisu. Talaalliin haalan daangayaa torbeewwan jalqabaa hojjatoota kunuunsa fayyaa haalan saaxilamoo ta’aniif namoota dhabbatoota kunuunsa yeroo dheera keessa jiraatani qofaafi kennama.
Waliigalatti, talaallin COVID-19 bara 2021 keessa baldhinaan dhiyaata. Namootni COVID-19n qabamuuf haalan saaxilammo ta’an ykn yoo qabaman rakkina fayyaa ulfaataa qaban kan akka namoota gurgudoo haala fayyaa baay’ee hama’a qaban, hojjatoota barbaachisoo COVID-19 tin saaxilamuuf sodaa guddaa irra jiran, fi namoota umrii 65 ykn oliitif dursi kennama. Dhumarratti, namni barbaadu martuu talallii argachuu ni danda’a.
Waayee tamsaasa talaallii COVID-19 Isteeta Washington dabalataan asitti baradhaa (Ingiliffa qofaan jira).
Gatiin talaallii COVID-19 meeqa ta’a?
Talaallii COVID-19 tiif kaffaltiin hin jiru. Talaallin Medicare, Medicaid fi inshuransii dhuunfaa baay’een kafalama, namoota inshuransii hin qabneef gatiin talaallii ni kafalamaaf. Karoora inshuransii keessaniirratti ykn doktara bira dhaqxaniitti hundayee Kaffaltiin kan hafe ykn kan waajjira dhaqxanii jiraachuu mala.
Fayyaan Hawaasaa – Siyatiliif King Kaawuntii carraa kaffaltii-malee ykn kilinikoota talaalliiwwan bilisaa karoorfataa jira. Kilinikoota kanaafi tamsaassin walqixa dursa kennamaaf. Yeroo sadarkaa tamsaasa kana seenne odeeffannoon dabalataa baldhinaan tamsafama.
Talaallii hagam fudhachuu nabarbaachisa?
Talaalliin COVID-19 amma jiru qooda ykn qixa lama akka fudhatamu gaafata. Talaalliin lilmee duraa akka qaamni sirna ittisa dhukkubba ijaaruu eegalchiisa. Lilmeen talaallii lammataa imo ittissa guddisee tiskuu xumura. Lilmee talaalli lammataa guyyaa 21 ykn 28 eega ka duraa fudhateen booda siif keennamuu qaba talaallii siif keennamu irraati hundaa’ee. Talaalliin lamaan argatu kan akka tokkoo tahuu qaban. Yeroo lilmee talaalllii duraa argatu, haakimni talaallii siif keenne yoom talaallii lammadaa argatu siif hima.